09/23/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Monday, September 23, 2013, under သတင်းများ | 1 comment
ဗုဒ္ဓပွင့်ပေါ်ခဲ့တာက (BC 623)ဆိုတော့၊ ဗုဒ္ဓက ခရစ်တော်ထက် ၆၂၃ နှစ် ပိုစောခဲ့သလို၊ မိုဟာမက် ပေါ်ခဲ့တာက(AD 570)ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓ က မိုဟာမက် ထက်လည်း နှစ်ပေါင်း (၁၁၉၃)နှစ် ပိုစောခဲ့တော့ ၊
-အဲဒီလောက် သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ သွားအပေါ်မှာ သံသယမကင်းဖြစ်နေတဲ့ အနောက်တိုင်း သိပ္ပံပညာရှင်တို့ကအဲဒီ့ သွားကို Genetic Engineering နည်းနဲ့ စမ်းသပ် စစ်ဆေးလိုပါတယ်လို့ အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုလို့ တရုတ်အစိုးရက ခွင့်ပြုလိုက်တော့ သိပ္ပံပညာရှင်တို့စမ်းသပ်တွေ.ရှိချက်တွေကတော့
(၃)၎င်းသွားထဲမှာပါတဲ့ DNA(Deoxyribo Nucleic Acid) ဟာ သာမန်လူသားတဦးရဲ့ DNA နဲ့မတူဘဲ Supreme Lord(အမြင့်မြတ်ဆုံးအရှင်သခင်) ရဲ့ DNA အဖြစ် ကောက်ချက်ချပါတယ်တဲ့
-ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္ဘာကျော်သွားမှာကိုမဖြစ်စေချင်လို.ပါတဲ့။ အနောက်အုပ်စု/ အမေရိကန် နှင့် တရုတ် တို့ ပါဝါ ပြိုင်နေချိန်လဲ ဖြစ်နေတယ်လေ။
-သိပ္ပံပညာတိုးတက်မှုဟာ ဒီနေရာမှာကျတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ကောင်းမွန်နေပါတယ်
-ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ဒီသတင်းကိုကြားရတာ ဂုဏ်ယူ ၀မ်းသားမိမယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ဗျာ...
ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္ဘာကျော်သွားအောင် ဆင့်ကဲ Share ပေးလိုက်ကြစမ်းပါဗျာ !!!!!
မွတ်စလင် အိမ်ယာစီမံကိန်း ဆန္ဒပြသူနှစ်ဦး ထောင်သုံးလကျ
Posted by drmyochit Monday, September 23, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မွတ်စလင်တွေအတွက် ဆောက်လုပ်ပေးတဲ့ အိမ်ရာစီမံကိန်းကို ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ ရသေ့တောင်မြို့ ခံ ၂ ဦးကို ဒီနေ့ ရသေ့တောင်မြို့နယ် တရားရုံးက တရားမဝင် စီတန်းလှည့် လည်ခြင်း ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၃ လစီ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လအတွင်းက ရသေ့တောင်မြို့မှာ အိမ်ရာစီမံကိန်းကို ဆန္ဒဖော် ထုတ်ခဲ့သူတွေထဲက ကိုကျော်မိုးထွန်းနဲ့ ကိုသန်းဌေးတို့ကို မြို့နယ် တရားရုံးက ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး စစ်တွေအကျဉ်းထောင်ကို ပို့လိုက် တယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။
ဒီနှစ် မတ်လ ၇ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ်က မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်တွေအတွက် လုံးချင်းနေအိမ်တွေ ဆောက်လုပ်ပေးမယ့် အစီအစဉ်တွေကို စစ်တွေ၊ ကျောက်တော်၊ မင်းပြား၊ မြောက်ဦး၊ ရသေ့တောင်၊ တောင်ကုတ်စတဲ့ မြို့နယ်တွေက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ တစ်ရက်တည်း ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးက စစ်တွေ၊ ကျောက်တော်၊ ရသေ့တောင်နဲ့ တောင်ကုတ်မြို့တွေက ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ၁ဝ ယောက်ကို ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ တရားစွဲဆိုခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားများ သတိထားရမည့် တတိယအဖြစ်များဆုံးဆီးကျိတ်ကင်ဆာ
Miss Supranational 2013 မှာ သရဖူဆောင်း သွားတဲ့ ဖိလင်ပိုင်နိုင်ငံက မစ္စ Mutya Datul ရဲ့ ဘ၀ ဇာတ်ကြောင်းလေး
Posted by drmyochit Monday, September 23, 2013, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
ဘ၀ မမေ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင် အလှမယ်ရဲ့ သူ့ဘ၀၊ သူ့အကြောင်း ပြောသွားတာကို မစ်ဆိုလိုဂျီ က အခုလို ဖော်
ပြ ထားပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်ဘာသာစကားနဲ့ မေးမြန်း ဖြေဆိုထားကြတာပါ။
Posted by drmyochit Monday, September 23, 2013, under မှုခင်း | No comments
၂၃.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၀၃၃၀ အချိန်တာမွေမြို့မရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ကာမစိတ်ကြွဆေး များရောင်း ချနေကြောင်း သတင်းအရ တာမွေမြို့နယ်၊ တာမွေကြီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ သမိန်ပရမ်းလမ်း ပလက်ဖေါင်းပေါ်ရှိ မြင့်လှိုင်၊ တာမွေကြီး(က/ဂ)ရပ်ကွက်နေသူ၏ဆေးဆိုင်အား ရှာဖွေရာ သစ်သားခေါက် ဗန်းအ တွင်း ကာမစိတ်ကြွဟော်မုန်း ဆေးများဖြစ်သည့် GOOD MAN ၊ ANPHAMALEPLUS ၊MAX MAN ၊ VIAGRA ၊ MIRBEAN ၊ PIOTIN ၊ GREEN MAGRA ၊ MASTIGRA ၊PLANT VIGRA ၊ KING BOSS တံဆိပ်များပါဆေဗူးများ၊DR-X-100 ၊ MCC ၊ CAVERTA တံဆိပ်များပါဆေးကဒ်များ၊ STRONG POWER ၊ BGNTLEY ၊ BLACK DIAMOND တံဆိပ်များပါဆေးထုပ်များ၊ BLACKANT တံဆိပ်ပါဆေးတောင့် များနှင့်ဆေး ပစ္စည်း များရောင်းချရရှိသည့်ငွေကျပ် (၉၀၀၀)တို့အား တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိသဖြင့် တာမွေမြို့မရဲစခန်း(ပ)၄၁၄/၂၀၁၃၊အမျိုးသားဆေးဝါးပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အသက်မပြည့်သေးသူကို အိမ်ထောင်သည်က ခိုးယူပေါင်းသင်းသဖြင့် အမှုဖွင့်တိုင်တန်း
အသက်မပြည့်သေးသည့် သမီးငယ်ကို ခိုးယူပေါင်းသင်းသည့် အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် ယင်းအမျိုးသား၏ ဇနီးဖြစ်သူတို့ကို အရေးယူပေးရန် တိုင်ကြားလာသဖြင့် မှော်ဘီရဲစခန်းက စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက သတင်းထုတ်ပြန် လိုက်သည်။
မှော်ဘီမြို့နယ် ဘွက်ကြီးအုပ်စုတွင် နေထိုင်သည့် ကာယကံရှင် ကလေးငယ်၏ မိခင်ဖြစ်သူက အမှုဖွင့် တိုင်တန်းထားသည်။
သူမက တိုင်တန်းထားရာတွင် ၄င်း၏ သမီးငယ်ဖြစ်သူ မ------(၁၅)နှစ်သည် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်က မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ လက်အိတ်စက်ရုံသို့ အလုပ်သွားပြီး ညအချိန်ထိ အိမ်ပြန်ရောက်မလာသဖြင့် ရှာဖွေခဲ့စဉ် စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက် တွင် သမီးဖြစ်သူ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်ဟု ဆိုထားသည်။
ထို့နောက် သမီးဖြစ်သူက သူမအလုပ်သွားစဉ် ပုံမှန်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ လိုက်ပို့ပေးနေသည့် မှော်ဘီမြို့နယ်နေ ကို----က မြို့ရှောင်လမ်းရှိ 'ဆုံဆည်းရာ' တည်းခိုခန်းသို့ သွေးဆောင်ခေါ်သွားခဲ့သည် ပြောခဲ့ကြောင်း ရဲအား ဆက်လက် ထွက်ဆိုထားသည်။
ထို့ပြင် ယင်းတည်းခိုခန်းတွင် ရှိနေစဉ်မှာပင် ၎င်းအမျိုးသား၏ ဇနီးဖြစ်သူ မ---- ရောက်ရှိလာပြီး ညစ်ညမ်းစွာ ဆဲဆိုကာ သမီးဖြစ်သူ၏ ပါးအား လေး၊ ငါးချက်ခန့် ရိုက်ခဲ့သည်ဟု တိုင်ကြားထားသည်ကိုလည်း မှုခင်းမှတ်တမ်းတွင် တွေ့ရသည်။
ထို့ကြောင့် သမီးဖြစ်သူအား ကို---- က တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ၎င်း၏ မိခင်နေအိမ်သို့ ခေါ်သွားကာ ခိုးယူပေါင်းသင်းခဲ့သည်ဟု ဆို ထားသည်။ ထို့နောက် စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ၎င်း၏ဇနီးက သမီးဖြစ်သူအား ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် သမီးဖြစ်သူအား ခိုးယူပေါင်းသင်းသည့် သူအား အရေးယူပေးရန် စွပ်စွဲ တိုင်တန်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းတိုင်တန်းမှုကို မှော်ဘီမြို့နယ် ရဲစခန်းက (ပ)၅၄၀/၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး တိုင်တန်းခံရသူများကို လိုက်လံရှာဖွေလျက်ရှိကာ ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ပုဒ်မ ၃၆၃/ ၂၉၄/၃၂၃ တို့ဖြင့် ဖမ်းဆီး တရားစွဲတင်မည်ဟု တိုင်းရဲဌာနက ဆိုထားသည်။
Posted by drmyochit Monday, September 23, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
တနင်္ဂနွေနေ့က ဆီးရီးယား အစိုးရ အနေဖြင့် ဓာတုလက်နက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရုရှားထံ လွှဲပေးရန် သဘောတူညီခဲ့သည့်နောက် ယခုတိုက်ခိုက်မှု ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ၊ ဒမတ်စကက်မြို့တော်ရှိ ရုရှားသံရုံးကို မော်တာဖြင့် အပစ်ခံရခြင်းကြောင့် သံရုံးဝန်ထမ်း (၃)ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့က ဆီးရီးယား အစိုးရ အနေဖြင့် ဓာတုလက်နက် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရုရှားထံ လွှဲပေးရန် သဘောတူညီခဲ့သည့်နောက် ယခုတိုက်ခိုက်မှု ပေါ်ပေါက် လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆီးရီးယား သူပုန်တပ်များထံမှ ပစ်ခတ်သည်ဟု ယူဆရသည့် မော်တာ ကျည် တစ်တောင့်သည် ဘရာဇားရှိ ရုရှားသံရုံးထဲ ကျရောက် ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။ ဘရာဇားနှင့် အနီးတဝိုက် တွင် ဆီးရီးယား အစိုးရတပ်များနှင့် သူပုန်တပ်ဖွဲ့များကြား အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လျှက် ရှိနေ သည်။
"မော်တာကျည်ဆန်ကြောင့် သံအမှုထမ်း (၃)ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကို ဆေးဝါး ကုသပေးခဲ့ ရပေမယ့် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရလောက်အောင်တော့ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး"ဟု ရုရှား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဌာနက ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ကို စုံစမ်းမှုများ ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ရုရှားအနေဖြင့် ဆီးရီးယားရှိ သံတမန် လှုပ်ရှားမှုများကို လုံခြုံရေး ပိုမို မြှင့်တင်နိုင်ဖွယ် ရှိနေကြောင်းလည်း သံရုံး၏ ဖော်ပြချက်တွင် ပါရှိသည်။ ဆီးရီးယား သမ္မတ ဘာရှာအာဆက်ဒ်သည် ရုရှား၏ အဓိက မဟာမိတ် တစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေခဲ့ခြင်းကြောင့် အတိုက်အခံ သူပုန်တပ်ဖွဲ့များက မကြာခဏ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ ယင်းတိုက်ခိုက်မှု မတိုင်မီ နာရီပိုင်းမျှ အလိုတွင် ရုရှား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆာဂျီလော့ဗ်ရော့ဗ်က မိမိတို့ အနေဖြင့် ဆီးရီးယားရှိ ဓာတုလက်နက်များ ဖျက်သိမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို စောင့်ကြည့်ရန် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ စေလွှတ်သွားရန် အသင့်ရှိနေကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သေးကြောင်း သိရှိရသည်။
၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ရိုက်နှက် ထွက်ပြေးသွားသူများအား ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ
၂၁-၉-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၂၀၀၀ အချိန် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ သီတာရပ်ကွက်၊ ““ရွှေဝါ၀င်း”” ကဖီးနှင့် အအေး ဆိုင်တွင် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်၊ မိုင်းနားကျေးရွာနေ အောင်မျိုးမြင့်(၂၀)နှစ်သည် သူငယ်ချင်း များဖြစ်သူ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ စီတာပူရပ်ကွက်နေ နေသူမြင့်(၂၀)နှစ်၊ မနွေးနွေး၊ မသီတာဝင်း တို့နှင့်အတူ အအေးသောက်ေ နစဉ် ၎င်းတို့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဝိုင်းရှိ လူငယ်(၃)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၁)ဦးတို့မှ ““ရုပ်တွေ ကိုယ်က ကြည့်လို့ကိုမရဘူး တောသားရုပ်တွေ””ဟု စောင်းမြောင်းပြောဆိုနေသဖြင့် အောင်မျိုးမြင့်မှ မနွေးနွေးနှင့် မသီတာဝင်းတို့အားပြန်ခိုင်းပြီး စီတာပူရပ်ကွက်နေ သူငယ်ချင်းများထံ ဖုန်းဆက်ခေါ်ခဲ့ရာ မောင်အေးရှမ်း(ခ)အောင်ကျော်ဖြိုးပါ(၃)ဦး ဆိုင်ကယ်(၁)စီးဖြင့်ရောက်ရှိလာ၍ ၎င်းတို့(၅)ဦးအတူ ဆိုင်မှပြန်လာခဲ့သည်။
ထိုသို့ပြန်လာစဉ် သီတာရပ်ကွက်၊ ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက် လမ်းဆုံအရောက်တွင် ဆိုင်အ တွင်း၌စောင်းမြောင်း ပြော ဆိုခဲ့သူ အမျိုးသား(၃)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး(၁)ဦးတို့ နောက်မှလမ်းလျှောက်လိုက်လာသည်ကိုတွေ့ရှိရ၍
အောင်မျိုးမြင့်ပါ(၅)ဦးမှ ဆိုင်ကယ်များရပ်ပြီး စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် ဆိုင်အတွင်းမှ ထွက်လာသူ အမျိုးသား(၃) ဦးမှ အောင်မျိုးမြင့်တို့အဖွဲ့အား ၀ိုင်းဝန်း ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်၍ တကွဲတပြားစီထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်။
၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ခံရမှုကြောင့် နေသူမြင့်တွင် ဦးခေါင်းနောက်စေ့ပြတ်ရှဒဏ်ရာ(၁)ချက်၊ အေးရှမ်း (ခ)အောင်ကျော်ဖြိုးတွင် ရင်ဘတ် ၀ဲဘက်ပြတ်ရှဒဏ်ရာ(၁)ချက်၊ ၀ဲလက်ကောက် ၀တ်ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာ(၁) ချက်တို့ ရရှိ ခဲ့ သဖြင့် အောင်မျိုးမြင့်မှ အရေးယူပေးရန်တိုင်တန်းခဲ့ရာ မြစ်ကြီးနားမြို့ မရဲစခန်း(ပ) ၁၁၇/၂၀၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၂၆/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ထိုသို့စစ်ဆေးနေစဉ် ဒဏ်ရာရရှိသူ အေးရှမ်း(ခ)အောင်ကျော်ဖြိုးသည် မြစ်ကြီးနားမြို့ အထွေထွေရောဂါ ကုဆေး ရုံကြီး တွင် ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရာမှ ရရှိသောဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးသွား ခဲ့သောကြောင့် ပြစ်မှု ပုဒ်မ ၃၂၆/၁၁၄ မှ ၃၀၂/၃၂၆/၁၁၄ သို့ ပြောင်းလဲအရေးယူခဲ့ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား ဖမ်းဆီး ရမိရေး စုံစမ်းဆောင် ရွက် ခဲ့ရာ ““ရွှေဝါ၀င်း””ကဖေးနှင့်အအေးဆိုင်အတွင်း အောင်မျိုးမြင့်တို့အား စောင်းမြောင်းပြော ဆိုခဲ့ သူ များမှာ အောင်ပြည့်သူ၊ သူရိန်မြင့်၊ ကတုံးနှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ဧရာရပ်ကွက်နေ မသီတာ စန်း(၁၇)နှစ်တို့ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိခဲ့ရသည်။
မသီတာစန်းအားစစ်ဆေးချက်အရ အောင်မျိုးမြင့် တို့အား ၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်သူများမှာ အောင်ပြည့်သူ၊ သူရိန်မြင့်နှင့် ကတုံးတို့(၃)ဦးဖြစ်ပြီး ရန်ပူရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်ကြောင်းသိရှိရ၍ မြစ်ကြီး နားမြို့ရဲစ ခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရန်ပူရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်း၍ ရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ၂၂-၉-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၀၁၃၀ အချိန်တွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ သူရိန်မြင့်(ခ)အုန်းမွှေးလုံး(၁၉)နှစ်နှင့် အောင်ပြည့် သူ(ခ)အငယ်ကောင်(၁၉)နှစ်တို့ ၂ ဦးအား ရန်ပူရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၁၆)ရှိ ၎င်းတို့၏နေ အိမ်မှလည်းကောင်း၊ ကျော်သူဝင်း(ခ)ကတုံး (၁၈)နှစ်အား ရန်ပူရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၈)ရှိ ၎င်း၏နေအိမ်မှ လည်းကောင်း အခင်းဖြစ်စဉ်ကိုင်ဆောင်ခဲ့သည့် ဓါး(၂)ချောင်းနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သတင်းရ ရှိသည်။
Posted by drmyochit Monday, September 23, 2013, under အနုပညာ | No comments
Miss Supranational ပြိုင်ပွဲတွင် ဆု လေးဆုဆွတ်ခူးခဲ့သည့် ခင်ဝင့်ဝါသည် Star model Int’l နှင့် ချုပ်ဆို ထားသည့် စာချုပ...်ပါ စည်းကမ်းချက်အချို့ကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့သဖြင့် ငွေကျပ် သိန်း ၃၀ လျော်ကြေး ပေးအပ် ၍ ရုပ်သိမ်း လိုက်ကြောင်း ခင်ဝင့်ဝါက မဇ္ဈိမသို့ပြောကြားလိုက်သည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ခင်ဝင့်ဝါအနေဖြင့် Miss Supranational Myanmar Organization ဖြင့် ချုပ်ဆို ထားသည့် အတိုင်း တစ်နှစ်တာ လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဆက်လက် ပြောဆိုလိုက်သည်။
“သမီး Star မော်ဒယ်လ်နဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်အတွက် လျော်ကြေးငွေကို ဒီလလယ်မှာ Miss Supranational Myanmar Organization က ပြုလုပ်တဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာပဲဆက်ပြီး အလုပ်တွေ လုပ်သွား မှာပါ၊ ဆရာဂျွန်လွင်နဲ့ ဘာမှတော့ ပြဿနာမရှိပါဘူး၊ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ”ဟု ခင်ဝင့်ဝါက ပြော သည်။
ယင်းသို့ စာချုပ်အား ပယ်ဖျက်ခြင်းအပေါ် Star Model int’l မှ ဂျွန်လွင်က ““အခု အချိန်မှာ မပြေလည်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ သူလည်း သူ့အလုပ် သူလုပ်နေတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အေဂျင်စီအနေနဲ့ ကလေးတွေ ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်၊ စာချုပ်ချုပ်ထားပေမယ့်လည်း သူတို့တွေ အလုပ်လုပ်ခွင့် ရနေမှာ ပါ။ ပြည်ပကို သွားပြိုင်ကြတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ ပို့ပေးတဲ့ organizer တွေက အကျိုးမြတ်လိုလို့ လွှတ်ပေး တာလား။ စေတနာနဲ့ လွှတ်ပေးတာလား ဆိုတာကို သိရမှာပါ။ စာချုပ်ဆိုတာက စည်းနဲ့ဘောင်နဲ့ အလုပ် လုပ်ဖို့ အတွက် လုပ်ထားတာပါ။ အကျိုးအမြတ်အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ စာချုပ်အတိုင်း တကယ်ပေးလျော် ရမယ်ဆိုရင် ဟိုဘက်ကို သိန်းတစ်ထောင်လျော်ရမှာ ကိုယ့်ဘက်က သိန်း ၃၀ ပဲ လျော်ရမှာ ဆိုတော့ ဘယ်ဘက်ကိုလျော်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူ့အနေနဲ့ ဟိုဘက်ကို စာချုပ်ချုပ် ထားတော့ အခက်အခဲဖြစ်နေတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ငါးနှစ် စာချုပ် ချုပ်ထားပေမယ့် သိန်းကျပ် ၃၀ သတ် မှတ်ပြီး စာချုပ်ကို ဖျက်ပေးခဲ့တာပါ”ဟု ပြောသည်။
အမြန်ဝိတ်ကျစေမည့် အစား ၁၀ မျိုးခန္ဓာကိုယ်တွင် မလိုအပ်သော အဆီပိုများ ရှိပါက အမြန်ဆုံး ကျဆင်း စေရန်ရည်ရွယ်၍ ရေးသားလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ အစား ၁၀ မျိုးကို စားပါက မလိုအပ်သော အဆီပိုများ အမြန်ဆုံး ကျဆင်းစေနိုင် ပါတယ်။
ဂျုံများများ စားပါ။ ဂျုံစားခြင်းအားဖြင့် ကိုလက်စရောဓာတ်ကို လျော့ကျစေတဲ့ အပြင် အစာခြေ စနစ် ကိုလည်း ကောင်းမွန်စေ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂျုံကို များများ စားသင့်ပါတယ်။
ဥမျိုးမျိုးကို စားသုံးပါက ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ကြွက်သားများကို ကြီးထွား စေနိုင်တဲ့အပြင် ကိုလက်စရော ဓာတ်ကိုလည်း လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူဟာ အဆီပိုတွေကို ကျဆင်းစေရုံသာ မက ကင်ဆာရောဂါ အတွက်လည်း ကောင်းမွန်စေပါ တယ်။ ထို့ပြင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ခွန်အား ဖြစ်စေတာကြောင့် စားသုံးသင့်ပါတယ်။
ပျားရည်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ခွန်းအား ဖြစ်စေပါတယ်။ ထို့ပြင် အဆီကိုလည်း သိသိသာသာ ကျဆင်းစေ နိုင်ပါတယ်။ ပျားရည်ကို နေ့စဉ်မှီဝဲပေးပါ။
လက်ဖက်ရည်ကြမ်း များများ သောက်ခြင်းဟာ ဝိတ်ကျစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ များများမသောက်နိုင် ဘူးဆိုရင်တောင် တစ်နေ့ကို နှစ်ခွက် လောက် သောက်ပေးပါ။
သံပုရာရည်ကို ဝိတ်ကို အလျင်အမြန်ကျစေ နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ် သံပုရာရည် သောက်သင့်ပါ တယ်။ နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် အကြံပေးချင်တာက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ အချိန်အများကြီး မပေးနိုင် ရင်တောင် မနက်ခင်းတိုင်း လမ်းလျှောက် စေချင်ပါတယ်။
Special thanks >>တွေးမိတွေးရာလေးများ<<
ယောင်္ကျားလေးများ သိထားသင့်တဲ့ ယောင်္ကျား ပြီးခြင်း (ONLY +18)
Posted by drmyochit Monday, September 23, 2013, under ဆေးပညာအသိဖြင့် |2comments
Q: ဆရာခင်မျာ။ ကျွန်တော့် အသက်က ၃ဝ နှစ်ဝန်းကျင်ပါ။ ကျွန်တော် မေးချင်တာက လိင်မှုဆက်ဆံရေးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ရည်းစားနဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်တော့်လိင်အင်္ဂါက စပြီး ၁ဝ မိနစ်လောက်ဆို ကျသွားပါတယ်။ ပြန်မာအောင် လုပ်ပြီး ထပ်လုပ်ပြန်ရင်လဲ၊ ၁ဝ မိနစ် ဝန်းကျင်ဆို ပြန်ပြန်ကျသွားတတ်ပါတယ်။
တခါတခါ ပြီးဖို့လဲ အတော်လေး ကြာတဲ့အပြင် လိင်ဆက်ဆံရင်းနဲ့ မပြီးဖြစ်ဘူး။ အမြဲတမ်း Hand-job လုပ်ပေးမှ ပြီးသွားတတ်ပါတယ်။ တခါ ပြီးရင်တော့ ၁ နာရီလောက် နားပြီး၊ ပြန်ဆွပေးရင် ပြန်မာလာပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနလိုပဲ လိင် ဆက်ဆံမှု ပြန်နေရင်းနဲ့ပြန်ကျသွားတတ် ပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒက လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရင်း ပြီးချင်သူပါ။ မိန်းကလေးနဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အကြိမ် ကျွန်တော့်မှာ အတော်လေး နည်းပါးပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Masturbation လုပ်တာ များပါတယ်။ ကျွန်တော် စိုးရိမ်တာက Masturbation အလုပ်များလို့ လက်ရဲ့အားကို လိင်ဆက်ဆံမှုလုပ်တာ မလိုက်နိုင် တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ပန်းသေပန်းညိုးများ ဖြစ်နေပြီလား ဆိုတာကိုပါ။ များသောအားဖြင့် သုက်လွှတ် မြန်တာကို ထိန်းဖို့ ကြိုးစားတဲ့ကြားမှာ ကျွန်တော်က ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေတော့ အရမ်းကို စိုးရိမ်နေမိပါတယ်။
A: (မာစတာဘေးရှင်း) ဆိုတာ လူငယ်တိုင်း မကင်းပါ။ သူတို့တတွေ ရည်းစားသနံထား၊ အိမ်ထောင်ရက်သား ကျကြတာပါဘဲ။ ငယ်တုံးက အကျင့်ကြောင့် နောင် ဆက်ဆံရေးကိစ္စမှာ အနှောင့်အယှက် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မဖြစ်ပါ။
လိင်စိတ်ဝင်စားသူနှစ်ဦး အသားချင်း မထိတွေ့ရခင် ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ အင်္ဂါစိုစွပ်၊ သန်မာလာတာဟာ စိတ်ကြောင့် ဖြစ်လာတာပါ။ နောက်တဆင့် အင်္ဂါတွေ ထိတွေ့လာရင် ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်မှု၊ အင်္ဂါစိုစွပ်မှု၊ အင်္ဂါသန်မာမှုတွေဟာ ပိုမို မြင့်မား လာစေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲလို အချိန်မျိုးမှာတောင် စိတ်မှာ တစုံတရာ အတားအဆီး ရှိလာတယ်ဆိုရင် နောက်ကို ပြန်ကျ၊ တစ်ကနေ ပြန်စရတယ်။ တယ်လီဖုံးလာလို့၊ တံခါးခေါက်လို့ ဆိုတာမျိုး။ ဒါ ရောဂါတခုရဲ့ လက္ခဏာ မဟုတ်ပါ။ ဇီဝကမ္မ (ဖီဇီယိုလော်ဂျီကယ်) ဖြစ်စဉ်တရပ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးတဲ့သူမှာ ပန်းညှိုးရောဂါ မရှိပါ။ ရှိတဲ့သူတွေက ၁ဝ မိနစ် မပြောနဲ့ စတောင် မစနိုင်ကြရှာပါ။ အင်္ဂါချင်း ထိတွေ့မှုအဆင့် ရောက်နေရင်းကနေ ပြန်ကျသွားတာမျိုးက ပြင်ပပယောဂ မပါဘဲ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ရုပ်ပိုင်းက ကောင်းနေတာမို့ စိတ်ပိုင်းကို ပြင်ဘို့ လိုမယ်။ “အင်္ဂါသန်မာမှု” ဆိုတာ စိတ်ဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့ အများကြီး ဆိုင်တယ်။ Viagra ဆေး ဆိုတာတောင်မှ ပန်းသေ-ပန်းညှိုးကို ဆေးတန်ခိုး တခုထဲနဲ့ မဟုတ်ဘဲ၊ စိတ်ထဲက ဖြစ်ပေါ်လာမှ သွေးတွေ ပိုလျှောက်လာလို့ သန်မာလာစေတာ ဖြစ်တယ်။
စိတ်ဖြစ်ပေါ်မှုကို ဘယ်လိုရအောင် လုပ်မလဲ။ ရိုးရိုးပြောရင် စိတ်ကိုနိုးဆွစေနိုင်တဲ့ အတွေး၊ အမြင်၊ အကြား၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အထိအတွေ့၊ ဆိုတဲ့ အာရုံခြောက်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ တယောက်နဲ့ တယာက် မတူပါ။ ဂီတ၊ အစားအသောက်၊ ကြိုက်တာခြင်း မတူကြသလိုပါဘဲ။ ခက်တာက စိတ်ကို အာရုံတခုမှာ စူးစိုက်ထားနိုင်အောင် လူတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူး။ Zen ကို ဒီလိုကိစ္စနဲ့ တွဲရေးတာမျိုး ဖတ်ချင် ဖတ်ဘူးကြ လိမ့်ပါမယ်။
လက်ကိုသုံးလို့ ပိုအဆင်ပြေတာကို ထောက်ရင် လက်ရဲ့ လှုတ်ရှားမှုတွေဟာ စိတ်ကျေနပ်-သာယာမှုကို ပိုပေးနိုင်ပြီး၊ မ အင်္ဂါကို အသုံးပြုခြင်းက ဒီလောက် အဆင်မပြေတဲ့ သဘော ဖြစ်နေတယ်။ အဆင်ပြေအောင် လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ကျားနဲ့ မ၊ ရုပ်နဲ့ စိတ်၊ လေးချက်ရှိတယ်။
ကျားအင်္ဂါရဲ့ ခန္ဓာဗေဒနဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်အရ လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုကို ဖြစ်စေတဲ့ အချက်အလက်၊ အခြေအနေတွေ သိဘို့ လိုလာတယ်။ Male orgasm ယောက်ျားပြီးခြင်း ကိုဘဲ ရွေးထုတ်ပြောကြ တာပေါ့။ ကိုယ့်လက်ကို အသုံးချတဲ့အခါ ဘယ်နေရာကို နိုးဆွမှုဖြစ်စေသလဲ။ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လို ထင်မြင်-ခံစားနေရင်းနဲ့ ပြီးဆုံးသလဲ။ ကိုယ့်အဖေါ်နဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ အဲလို အခြေအနေ မျိုးအတိုင်း ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
ကျားအင်္ဂါရဲ့ ထိပ်ဖျားပိုင်းဟာ အဓိကကျပါတယ်။ ထိပ်ဖျားပိုင်းမှာ အာရုံကြောတွေ စုဝေးနေတယ်။ တိတိကျကျ ပြောရရင် ထိပ်ဖျား (ခေါင်း) နဲ့ သူ့ရဲ့အောက် အလည်နေရာတွေက အရေးပါတယ်။
အရေပြား တွဲနေသလိုရှိတဲ့ နေရာပါ။ ဆွဲကြည့်ရင် မြားဦးပုံမျိုး။ သူ့ကို ဆွဲတင်းခြင်းဟာ အင်္ဂါကို သန်မာစေအောင် ဖြစ်စေသလို ခံစားမှုလည်း အများဆုံး ရစေတယ်။ လက်ကို အသုံးပြုရင်လည်း ဒါကို ဖြစ်စေအောင် လုပ်တာပါဘဲ။ ဒီတော့ ဆက်ဆံချိန်မှာလည်း အဲဒါမျိုး ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
မ အင်္ဂါကလည်း အဆင်ပြေဘို့ လိုသေးတယ်။ မွေးလမ်းဟာ ကလေးဖွါးရပြီဆိုတာနဲ့ အနည်းနဲ့အများ ပျက်စီးသွားရတယ်။ မွေးလမ်းကြောင်း ချဲ့မွေး၊ ပြင်ချုပ်ပေးတာတောင် မတူတော့ပါ။ တချို့က ပြန်မချုပ်ဖြစ်ပါ။ ချုပ်အုံးတော့ ချုပ်ရိုး မကောင်းတာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ပြန်ချုပ်ရာမှာလည်း ကြွမ်းကျင်မှု လိုသေးတယ်။ ကလေး မွေးဘူးတာနဲ့ မ အင်္ဂါအဝရဲ့ အောက်တည့်တည့် နေရာက စုတ်ပြဲသွားတော့တယ်။ ကလေး မမွေးဘူးရင်တောင်မှ တချို့စုတ်သွားတတ် သေးတယ်။ တင်းအား လျှော့သွားလို့၊ ထိမိစေတာကို နည်းသွားစေတယ်။ မ-အင်္ဂါကို လိုတယ်ထင်ရင် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ပြီး၊ အပျိုနဲ့ မခြားအောင် ဆရာဝန်များက ပါရမီ ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။
အပျိုစစ်-မစစ်ဆိုသူတွေမှာ ကွာခြားသွားပါပြီ။ ဒါကလည်း အကောင်း အဆိုးရှိသေးတယ်။ အတွေ့အကြုံ ရလာလို့ ပိုအဆင်ပြေစေတာလည်း ရှိတတ်တယ်။ “တခုလပ်နဲ့ အပျိုစင် ဘယ်ဒင်းသာလို့ယဉ်” ဆိုတာလိုပေါ့။
နောက်ပြီး မ အင်္ဂါအဝသာမက အဲဒီနေရာတဝှိုက်က ကြွက်သားနဲ့ အရွတ်တွေ သန်မာနေဘို့ လိုတယ်။ တချို့ဆိုရင် ထိန်းအား၊ တင်းအား၊ ပင့်အားတွေ လျှော့ကျပြီး၊ Prolapse of the Uterus “သားအိမ် ကျရောဂါ”ဖြစ်ရတယ်။ သားအိမ်ကျတယ် ဆိုတာ ခြုံပြောတာပါ။ အမှန်က သားအိမ်က မွေးလမ်းထဲ၊ မွေးလမ်းအပြင်ကို ထွက်လာတဲ့အဆင့်ထိ မရောက်သေးတာက ပိုတောင် များသေးတယ်။ သားအိမ်ကျတယ်လို့သာ ပြောတာ အမှန်က သားအိမ်ရှေ့က ဆီးအိမ် ကျ (ကြွံ) တာ Cystocele က အဖြစ်အများဆုံး။ ပိုဆိုးသူတွေက မွေးလမ်းနောက် (အောက်) ဖက်မှာရှိတဲ့ အစာဟောင်းအိမ် ကျ (ကြွံ) တာ Rectocele ဖြစ်တယ်။ ကံမကောင်းရင် ဆီးအိမ်၊ သားအိမ်၊ အစာဟောင်အိမ် သုံးခုလုံး တပြိုင်နက် ဖြစ်တယ်။ ခွဲစိတ်လို့ ရပါတယ်။
ကလေးမီးဖွါးရလို့ မဟုတ်ဘဲ၊ အနေအထိုင် လိုလို့ သားအိမ်ကျသူ အပျိုလေးတွေကို ခွဲစိတ်ပေးရဘူးတယ်။ အလေးအပင် မ တာ၊ အထိုင်အထ လုပ်ရတာ၊ အကြာကြီး ချောင်းဆိုးတာ၊ နှာချေတာ၊ ဝမ်းညှစ်သွားရတာ စတဲ့ ဗိုက်ထဲမှာ (ပရက်ရှာ) ဖြစ်စေတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေမှာ မဆင်ခြင်မိလို့ ဖြစ်ကြရတယ်။ (ဗဂျိုင်းနား) ဆိုတာ လုံခြုံမှုရှုဒေါင့်က ကြည့်ရင် (ဝိခ်-ပွိုင့်) အားနည်းချက်တခု ဖြစ်နေတယ်။ ဗိုက်ထဲမှာ တင်းအား၊ ဖိအားဖြစ်လာတိုင်း သူ့အပေါ် သက်ရောက်စေတယ်။ လူကြီး သူမတွေက မိန်းကလေးတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက “မိန်းကလေးလိုထိုင်” လို့ သင်တတ်တယ်။ ယဉ်ကျေးမှုအရသာမက ကျန်းမာရေး အရပါ ကောင်းတယ်။ ဆောင့်ကြောင့် မထိုင်သင့်ဘူး။
ဒီအင်္ဂါတွေမှာ ခန္ဓာဗေဒအရ အထိန်းတွေက ရှိနေပြီးသားပါ။ အထိန်းတွေဆိုတာ ကြွက်သားတွေနဲ့ အရွတ်ပြားတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကနေ စုစည်း မ တင်ပေးထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သတိမထားဘဲ၊ မထိန်းဘဲ၊ အမှတ်တမဲ့ဆိုသလို ချောင်းဆိုး၊ နှာခြည်၊ အလေးအပင် မ၊ အထိုင်အထတွေ လုပ်ရရင် ဒီကြွက်သားတွေကို အားနည်း၊ ပျက်စီးစေနိုင်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင် စုစည်း မ-တင်ပေးတဲ့အား လျှော့နည်းပြီး၊ ထွက်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့ မွေးလမ်းဆီကို ဦးတည်ပြီး ကျ၊ ထွက်၊ ကြွံ ဖြစ်လာတော့တယ်။ ဆက်ဆံရာမှာ လာထိခိုက်တယ်။
ဒီကြွက်သားတွေက စိတ်ကနေထိန်းလို့ရတဲ့ အမျိုးအစားတွေဖြစ်တာ ကံကောင်းတယ်။ အားနည်းတယ်ဆိုရင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီး ပြန်ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်တယ်။ Pelvic floor exercise လို့ခေါ်တယ်။ သိပ်မခက်၊ သိပ်အပမ်းမကြီးပါ။ ဘယ် ကြွက်သားတွေလဲ ဆိုတာသိဘို့ အရင်သင်ပေးရတယ်။ ဆီသွားနေတုံး မပြီးခင် ရပ်သွားအောင် အထိန်းခိုင်းတဲ့အခါ နေရာတဝှိုက်က ကြွက်သားတွေကို စိတ်ကနေ ကြုံ့ပေးရတယ်။ ဘယ်ကြွက်သားတွေဆိုတာ သဘောပေါက်ပြီဆိုရင် တကယ် ဆီးမသွားဘဲ နေရင်း-ထိုင်ရင်း၊ အလုပ်လုပ်ရင်း၊ လှဲနေရင်း အဲဒီကြွက်သားတွေကို စိတ်ကနေ တင်းလိုက်၊ လျှော့လိုက် လုပ်ပေးတာက လေ့ကျင့်ခန်း ဖြစ်တယ်။ တခါလုပ်ရင် ၁ဝ-၂ဝ ကြိမ်၊ နေ့တိုင်း ၂ ကြိမ် လုပ်ပါ။
နောက်တချက် လိုသေးတယ်။ (ပိုတက်ဆီယမ်) ဓါတ်ဆား နည်းနေရင် ကြွက်သား အားမကောင်းဘူး။ အစားအစာထဲမှာ နည်းနေတာနဲ့ ဝမ်းပျက်တာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်တယ်။ (ပိုတက်ဆီယမ်) ကြွယ်ဝတဲ့အစားတွေက ငှက်ပြောသီး၊ လိမ်မော်သီး၊ စပျစ်သီး၊ ဆီးသီး၊ ဖရုံ၊ ဟင်းနုနွယ်၊ အာလူး၊ ပဲသီးတောင့်၊ ကွမ်းသီးဂေါ်ဖီထုပ်၊ မုံလာဥ၊ ဒိန်ချဉ်၊ စတာတွေ ဖြစ်တယ်။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းနဲ့ အုန်းရည် သောက်တာ ကောင်းတယ်။ လိုရင် Potassium ဆေးသောက်ပါ။
ဆက်ဆံတာကို ဆက်ကြရအောင်။ ဆက်ဆံနေစဉ် ကျား အင်္ဂါက အပေါ်ဖုံးအရေပြားကလည်း ဆွဲလှန်၊ ဆွဲပိတ်၊ လှုတ်ရှားမှု လုပ်တယ်။ လက်နဲ့လည်း ဒါမျိုလုပ်တာဘဲ။ အင်္ဂါနှစ်ခုလုံး သုံးတာလည်း ဒီဖြစ်စဉ်က အချိန်အများဆုံး ယူရတယ်။ ကျားအင်္ဂါ ထိပ်ဖျားကိုရော ပြောခဲ့တဲ့ ခေါင်းအောက်နေရာ ကိုရော ထိမိစေတာဖြစ်ရင် ခံစားမှု အများဆုံး ရစေတယ်။ မ အင်္ဂါဟာ အဝနဲ့ အတွင်းပိုင်းတွေက မတူကြဘူး။ အဝက ကျဉ်းတဲ့အပြင် ကြွက်သားက လှုတ်ရှားနိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျားအင်္ဂါက အာရုံကြော အများဆုံးနေရာနဲ့ မ အင်္ဂါရဲ့ အကျဉ်းဆုံးနေရာ နှစ်ခု ထိမိစေတာဟာ ကျားအတွက် ပြီးချင်စိတ် ပိုစေတယ်။ ပြောခဲ့သလို မ အင်္ဂါကလည်း ကျန်းမာနေမှ ပိုကောင်းတယ်။
နောက်ဆုံးအချက်က မ စိတ်။ အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ် တယောက်နဲ့ တယောက် လိင်စိတ် အနည်းအများ မတူကြပါ။ အတွေ့အကြုံ၊ အသက်၊ အခြေအနေအရ မတူကြပါ။ (လယ်ဗယ်) တူတွေဆိုရင် အဆင်ပြေဆုံးပါ။ မတူပေမဲ့ တယောက် ယောက်ကနေ ဦးဆောင်နိုင်တယ်။ တဦးနဲ့တဦး ချစ်ခင်စိတ်ရှိသူများမှာသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ကိုယ့် (ပါတနာ) ကိုပါ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဘို့ စည်းရုံးပါ။
တယောက်က ခံစားမှု ကောင်းတဲ့ အခြေအနေဟာ နောက်တယောက် အတွက်လည်း အတူတူဘဲ။ အနေအထား၊ နည်းလမ်း၊ လှုတ်ရှားမှု၊ စကား၊ အနံ့၊ စတာတွေ အားလုံးဟာ နှစ်ဦးလုံးအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေစေသင့်တယ်။ စိတ်မစောပါနဲ့။ မစိုးရိမ်လွန်းပါနဲ့။ ဆက်ဆံကြတာဟာ တခါတလေ ပြီးပြီးပျောက်ပျောက်၊ တခါတလေ တမေ့တမြော။ တခါတလေ စီစီစဉ်စဉ်။ တခါတလေ ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်း။ ဒါ့ကြောင့် အမြဲ (ပါဖက်) ချည်း မဖြစ်တတ်တာမို့ မဟုတ်တဲ့ အခါမျိုးအတွက် သောက မထားပါနဲ့။ အရည်အတွက်ကနေ အရည်အသွေး တိုးတက်လာတာ စုံတွဲတိုင်းပါ။
အောက်က ရေးပြီးသားစာတွေကို အချိန်ရရင် ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
2. Early ejaculation (2) သုက်လွှတ်စောခြင်း အဆက်
3. Kegel exercises for Men ယောက်ျားများ စိတ်ဝင်စားကြသည်
4. Masturbation (မာစတာဘေးရှင်း)
5. Early ejaculation (1) သုက်လွှတ်စောခြင်း
၂၀၀၈ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ရေး၊အသစ်ပြန်လည်ရေး ဆွဲရေးတို့ အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီ များ၊တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်း များနှင့်အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်း များ အမြင်အမျိုးမျိုးဖြင့် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းနှင့် ပတ် သက်၍ ချင်းအမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇိုဇမ်းကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်း ခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုယ်ပိုင် အယူအဆကိုပြောချင် ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့မှာ အခြေခံဥပဒေ ၁၉၄၇ မှာရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါကို ပြု ပြင်မဲ့အစား အမှိုက်ပုံထဲထည့် လိုက်တယ်။ အဲဒါတွေ က ဘာ တွေဖြစ်လာသလဲဆိုရင် မာရှယ် လောကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပဲ။ စစ်အာဏာရှင်၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကိုဖိတ်ခေါ် တယ် ဆိုတာကအခြေခံ ဥပဒေကို အမှိုက်ပုံထဲထည့်လိုက် လို့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီနောက် ၁၉၇၄ မှာ ဖွဲ့စည်း ပုံဥပဒေ ကို ပြန်ဖော် ဆောင်လိုက်တယ်။
၁၉၈၈ မှာ အဲဒါကို မပြုပြင်ဘဲ အမှိုက်ပုံထဲ ထပ်ထည့်လိုက်တယ်။ နောက် တစ်ကြိမ် မာရှယ်လောကို ဖိတ် ခေါ်တာဖြစ် ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့အခြေခံဥပဒေ ဟာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သုံးလို့ရတာ၊ မရတာအပထား၊ အမှိုက်ပုံထဲ တော့ မထည့်ချင်ဘူး။ အစဆုံး ပြုပြင်ဖို့ဆိုတာ ရင်ထဲမှာပဲထားရ မှာဖြစ်တယ်။
ဒီအခြေခံဥပဒေကို ပြုပြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ ပြုပြင် ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ များ များပြုပြင်လေ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အခြေခံဥပဒေရမှာဖြစ်တယ်။ အခြေခံဥပဒေဆိုတာ ဖျက်သိမ်း ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ ပြုပြင်ရ မယ်ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခံယူချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင် မယ်ဆိုရင် ဘယ်အချက်တွေကို ပြင်ဆင်ရ
မယ်ဆိုတာကို ပြောပေး ပါခင်ဗျာ။အခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့ နိုင်ငံ တော်
ဆိုတာကို စဉ်းစားပေးကြ ပါ။ နိုင်ငံတော်ဆိုတာ ဘာလဲ။ သက်ရှိမဟုတ်
ဘူးလေ။ အခြေခံ ဥပဒေမှာ ဒီစကားလုံးက(၅၀) ကျော်လောက်ပါတယ်။
နိုင်ငံ တော်ဘာသာကြီးလေးရပ်ကိုစောင့် ရှောက်မယ်၊ ပြုစုမယ်ပြောတယ်။
ဒီပြဿနာက နိုင်ငံ တော်နေရာမှာ အစိုးရသာဖြစ်ရမယ်။ အခြေခံဥပဒေဟာ တိတိ ကျကျဖြစ်ရပါမယ်။ လိုရာစွဲသုံး တာမျိုး မဖြစ်ရဘူး။ အစိုးရသည် အစိုးရဖြစ်ရမှာ။ အဲဒီနေရာမှာ အားနည်းချက်က ဟိုလိုလို ဒီလို လိုနဲ့ လုပ်ထားတာရှိတယ်။ နိုင်ငံ တော်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ တကယ် တမ်းအရေးရယ်၊ အကြောင်းရယ် ဖြစ်လာတဲ့အခါ နိုင်ငံတော်ဆို တာဘယ်သူမှန်းမသိတော့
ဘူး။ လူပုဂ်္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်က ကာတွန်း ဆရာဖြစ်တော့ သူများမမြင်နိုင်တဲ့ဘက်ကပြောင်းပြန်ကြည့်ထားတဲ့ကိစ်္စဖြစ်
တယ်။ ဒီစကားလုံးကို က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း တယ်ဆိုတာကို ပြောချင်
အခုကျင်းပနေတဲ့လွှတ်တော် အပေါ် အမြင်သဘောထားရှိရင် ပြောပြပေး
ကျွန်တော်ဥပမာ (၂) ခုပေး ပြီးပြောချင်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
ဆိုတာက တဖြည်း ဖြည်းနောက်ဆုတ်ပေးရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲ
မတိုင် ခင်တုန်းက သိထားတာက လွှတ် တော်(၂)မျိုးပဲရှိတယ်လို့သိထား တယ်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပဲ။ နိုင်ငံရေး လောကထဲရောက်ပြီး ကိုယ်စား လှယ်ဖြစ်လာတော့ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို ရင်ဆိုင်နေ ရတယ်။ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုအမျိုး သားလွှတ်တော်ကနေတင်ပြခဲ့တဲ့ အဆိုတစ်ခုဟာ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ မဲခွဲတဲ့အခါ ဘယ် တော့မှ မနိုင်ဘူး။ အမျိုးသား လွှတ်တော်ဆိုတာ အင်မတန် နည်းတဲ့လူတွေအတွက် လုပ်ထား တာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်အမြင် ပြောရရင် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် သက်သက်ပေးရ မယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့ လုပ် ပိုင်ခွင့်သက်သက်ပေးရမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အခုကျွန်တော် တို့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဖြစ်နေတာ က ဟိုနေရာမှာ လမ်းပြင်မဲ့ကိစ်္စ၊ ရပ်ကွက်မီးမရတဲ့ကိစ်္စ၊ အဆုံးစွန် ဆုံးကျောင်းအိမ်သာ၊ဈေးအိမ်သာ ကိစ္စ အဲဒါတွေက လွှတ်တော်ထဲ မှာ ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။ အခု ကျင်းပနေတဲ့ လွှတ်တော်က အဆင့်အတန်းတွေလိုနေသေး တယ်။ လွှတ်တော်ဆိုတာက တကယ့်တိုင်းရေးပြည်ရေးကို ဆွေးနွေးရမဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကို ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ အိမ်ကိစ္စ၊ ယာကိစ္စ၊ ကျောင်းကိစ္စ၊ ကျောင်း
အိမ်သာဆောက်ဖို့ကိစ္စ။ အဲဒါတွေက တကယ်တမ်းက မြို့ နယ်ဦးစီးမှူး ရပ်ကွက်ဦးစီးမှူးတွေ လုပ်ရမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။ လွှတ် တော်ထဲမှာ အဲဒီကိစ္စတွေ တင်ပြ မဲ့အစား ဒီလိုအချိန်ဆွဲပြီး လွှတ် တော်ခေါ်ယူတဲ့ တစ်နေ့ကုန်ကျ စရိတ်အားလုံးနဲ့ အမြန်ဆန်နဲ့ အကျိုးရှိတဲ့ လွှတ်တော်မျိုးဖြစ် သင့်ပါတယ်။
အခုပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသ ကြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေတွေ ထွက် ပေါ်လာခဲ့တဲ့ အမြင်သဘော ထားကိုပြောပေးပါခင်ဗျာ။အဲဒါကတော့ စာထဲမှာပဲရှိ ပါတယ်။ ကျွန်တော်သေချာဖတ် ကြည့်တော့ ကျွန်တော် နားမလည် ပါဘူး။ စာထဲမှာရှိလို့ပါ။ လက် တွေ့တစ်ခုမှ မလုပ်လူးဆိုတာ ကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်း
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အောင်မြင်လာတာ ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲ။
အတိတ် ကံနဲ့ ပစ္စုပ္ပန် ကံတို့ကြောင့် လို့ထင်ပါတယ်။ အတိတ် ကံက ကိုယ်မမြင်ရဘူး။ ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ ကံတွေပေါ့။ ပစ္စုပ္ပန်ကံ ဆိုတာ လက်ရှိမှာကြိုးစားတဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်တဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်လာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်ရော ပရိသတ်က စိုးပြည့်ကို ကြိုက်တယ်လို့ထင်လဲ။
အခုနကပြောတာတွေနဲ့အကျုံး ဝင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုးစားတာလေး တွေလည်းပါမှာပါ။ ဘာကြောင့် ပရိသတ်စိုးပြည့်ကို ကြိုက်တာလဲဆိုတာကို စိုးပြည့် မပြောတတ်ဘူး။ ဘာကြောင့် စိုးပြည့်ကို ချစ်တာလဲ ဆိုတာကို စိုးပြည့် ပရိသတ်ကို မေးချင်ပါတယ်။
ရှူတင်မိတ်ကပ်လိမ်းရတဲ့ အချိန်တွေမှာရော စိုးပြည့်နှစ် သက်ရဲ့လား။
အမှန်တိုင်းပြောရရင် စိုးပြည့် မကြိုက်ဘူး။ စိုးပြည့်မိတ်ကပ်မ ကြိုက်ဘူး။ စိုးပြည့်အမှန်တိုင်း ပြောရရင် မျက်နှာကို သနပ်ခါးလိမ်းရတာ ပဲကြိုက်တယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာရော လှပတယ်လို့ ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းက ဘာဖြစ်မလဲ။
စိုးပြည့် ခန္ဓာကိုယ်မှာလှပတယ် ဆိုပြီး ခံယူထားတာဘာမှ မရှိပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်းရှိရင် အများဆုံး လုပ်တတ်တဲ့ အမူအကျင့်က ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်။ သီချင်းနား ထောင်တယ်။ စာအုပ်ဖတ်တယ်။ တရား ထိုင်တယ်။
ဒါရိုက်တာက ဒိုင်ယာလော့ခ်တွေ ချပေးရင်ရော လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ရတတ်သူလား။
ရတတ်ပါတယ်။ ဒါကလူတိုင်းပါပဲ။ အရေးကြီးတာ အာရုံစူးစိုက်မှုပေါ့။ အာရုံစူးစိုက်မှု မရှိရင်တော့ ဘာပြောပြော မကြားတော့ဘူးပေါ့။ စိတ်ကိုတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်ဆိုရင် အာရုံစူးစိုက်မှုအားကောင်းဖို့နဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ် ယောက်အတွက် စိတ်အာရုံစူးစိုက်မှု ရှိဖို့ပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း တရားထိုင်တာသရုပ်ဆောင်တွေအ တွက်ပိုပြီးအရေးပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ စိတ်အာရုံစူးစိုက်မှုအား ကောင်းတယ်။ စိတ်အာရုံစူးစိုက်မှု အားကောင်းရင် သင်ပြတာကို အလွယ်တကူမှတ်နိုင်တယ်။
အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ ထောင်ဒဏ်တသက် ချမှတ်ခံရသော တရုတ်ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမား Bo Xilai
KIO Technical Advisory Team နှင့် အစိုးရ MPC တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသော်လည်း KIA အဖွဲ့မှ လူသစ် စုဆောင်းမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်လျက်ရှိ၏
စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက် ၂၀၁၃
KIO Technical Advisory Team နှင့် အစိုးရ MPC တို့ စက်တင်ဘာ(၁၆)ရက်နှင့် (၁၇)ရက်တွင် မြစ်ကြီးနား၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး လာမည့် အောက်တိုဘာ(၅)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(KIA) အဖွဲ့မှ ဒေသခံကချင်လူငယ်/ရွယ်များအား လူသစ်စုဆောင်းမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း တနိုင်းမြို့ခံများ ထံမှ သိရှိရသည်။
``အရင်တုန်းက အမည်စာရင်း ကောက်ထားတဲ့ ရွာကလူငယ်တွေကို လူသစ်ဆိုပြီး အတင်းဖမ်းခေါ်နေတာပဲ၊ လာဖမ်းတဲ့အဖွဲ့က ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ရင်း(၁၄)ကလို့ သိရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်က တည်းက အဲဒီလိုပဲနာမည်စာရင်းနဲ့ လာခေါ်နေတာ၊ ရွာထဲမှာ လူငယ်တွေ မနေရဲကြတော့ဘဲ ထွက်ပြေးနေ ကြရတယ်လေ´´ ဟု မိုင်းခွန်ရွာသားတစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
KIA တပ်မဟာ(၂)၊ ရင်း(၁၄)မှ ဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိ ဇော်တောင်ဦးစီးအဖွဲ့သည် စက်တင်ဘာဒုတိယပတ်မှစ၍ တနိုင်း၊ မိုင်းခွန်၊ ရှဒူစွပ်တစ်ဝိုက်ရှိ ဒေသခံကချင်လူငယ်များအား လူသစ်အဖြစ် အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် လျက်ရှိရာ စက်တင်ဘာ(၂၁)ရက်နေ့အထိ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသော လူငယ်(၄၀)ဦးခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
``ရှဒူစွပ်ရွာက အဘွားကြီးယောက်ဆိုရင် သူ့မြေးကို ကချင်တပ်က အတင်းလာဖမ်းသွားတာကို မြင်ပြီး မစားနိုင်မသောက်နိုင်နဲ့ တငိုငိုတအီအီ ဖြစ်နေလေရဲ့ အခုအိပ်ယာထဲ ဗုန်းဗုန်းလဲနေတယ်၊ အခြေအနေ မကောင်းဘူး´´
KIO အနေဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပြီးသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ဒေသခံကချင်လူငယ် များအား လူသစ်အဓမ္မစုဆောင်းမှုများကြောင့် မိဘအုပ်ထိန်းသူများမှာ စိတ်သောကရောက်နေကြရကြောင်း၊ အချို့လူငယ်များမှာ ရွာ၌မနေရ၊ ပညာမသင်ရ၊ မိဘအား မလုပ်ကျွေးရဘဲ လူသစ်စုခံရမှာကို စိုးရိမ်သည့် အတွက် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြသလို အချို့မှာ ရဟန်းဝတ်သွားကြကြောင်း၊ အပြောနှင့်အလုပ်မညီသည့် လုပ်ရပ်များကြောင့် လာမယ့် အောက်တိုဘာ(၅)ရက်တွင် တွေ့ဆုံဖွယ်ရှိသည့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်း ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာလည်း ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် တစ်စုံတစ်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် လုံးဝအယုံအကြည်မရှိကြောင်း ယင်းဒေသခံများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရှိရပါသည်။
အရိုးကင်ဆာဝေဒနာရှင် ကလေးငယ် မောင်နန်းထိုက်လေးအတွက် နန်းခင်ဇေယျာ ရဲ့ ၀မ်းနည်းစကား
နန်းခင်နှင့်တကွ နန်းခင်ရဲ့ ပရိသတ်များမှဆေးဝါးကုသမှုအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးထားသော အရိုးကင်ဆာဝေဒနာရှင် ကလေးငယ် မောင်နန်းထိုက် (အသက် ၉ နှစ်) သည် ယနေ့ (၂၂.၉.၂၀၁၃)ညမှာမမျှော်လင့်ပဲလူ့လောကထဲကနေရုတ်တရက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီ့အတွက် မောင်နန်းထိုက်ရဲ့ မိဘတွေနဲ့ထပ်တူ နန်းခင်လည်း အထူးဝမ်းနည်းရပါတယ်။
မောင်နန်းထိုက်လေးက သူနေကောင်းရင် နန်းခင်အိမ်ကိုလိုက်လည်ပြီး အတူတူကစားမယ်လို့ပြောဖူးပါတယ်။ နန်းခင်ကိုလည်း သံယောဇဉ်ရှိရှာတဲ့ ကလေးလေးပါ။ သူ့ရဲ့ဆန္ဒလေးမပြည့်ရှာတဲ့အတွက် နန်းခင် ပိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူလေးရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုပို့ဖို့ရန်အတွက် နန်းခင် အလုပ်တွေ မအားလပ်တဲ့ကြားက သွားဖြစ်အောင်သွားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါ တယ်။ မောင်နန်းထိုက်ရဲ့ ဈာပနအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ " မောင်နန်းထိုက်လေးရေ ကလေးရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်ပို့နိုင်ဖို့အတွက် မမနန်းခင် ကုန်းတစ်တန် ရေတစ်တန်လာရမယ်ဆိုရင်လည်း မရောက် ရောက်အောင် လာခဲ့ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ကွယ်...။"
မောင်နန်းထိုက်လေးထံ အလှူငွေပေးအပ်စဉ်က အတူတူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးကိုအမှတ်တရအဖြစ် ကြေကွဲဝမ်းနည်းစွာဖြင့် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
X Video Editor- Beautify video (Andriod ဖုန်းတွေမှာ Video တည်းဖြတ်လို့ရတဲ့ ဆောဝဲလ် လေးပါ)
Posted by drmyochit Monday, September 23, 2013, under နည်းပညာ | No comments
X Video Editor လေးက Andriod ဖုန်းတွေအတွက် ဗီဒီယို တည်းဖြတ်လို့ရတဲ့ ဆောဝဲလ်ကောင်းပါ။ သူ့ရဲ့ Function တွေကတော့ ဗီဒီယိုတွေ ကိုယ်တိုင်ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ပြီး Effect တွေ ထည့်, စာသား Subtitle တွေ ထည့်, ပြီးတော့ ရိုက်ထားပြီးတဲ့ ဗီဒီယိုတွေ တခုနဲ့တခု ဆက်လို့ရတယ်။ ဗီဒီယိုတွေ ရဲ့ နောက်ခံသီချင်းလေးကို SD Card မှာရှိတဲ့ MP3 တွေကို စိတ်ကြိုက် ပြောင်းထည့်လို့ရတယ်။
ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ Video တွေကို စာသားထည့်, Effect ထည့်, နောက်ခံသီချင်းထည့်, ပြီးတော့ ဗီဒီယိုတွေကို ပြန်ဆက်, တော်တော်လေးကိုအဆေပြေပါတယ်။ ကွန်ပြူတာလောက် သုံးမရပေမဲ့ ဆောဝဲ အားလုံး တွေတော်တော်များများထဲမှာ ဒီ X Video Editor လေးက တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျနော် အချိန်နည်းနေလို့ လုပ်နည်း ဗီဒီယိုဖိုင်မတင်နိုင်တာ တောင်းပန်ပါတယ်နော်။
သုံးရတာလည်း လွယ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ဆောဝဲဒေါင်းပြီး ကလိကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ ဖုန်းဆောဝဲတွေထဲမှာ Video ဆောဝဲ Effect အလန်းဆုံး တခုကို ဒီလင့်မှာ ၀င်ယူလိုက်ပါ။ အဲကရတဲ့ ဆောဝဲနဲ့ အခုတင်ထားတဲ့ X Video Editor လေးနဲ့ ဆိုရင် တော်တော်လေး လန်းသွားမှာပါ။ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်း ယူနိုင်ပါပြီ။
ဧရာဝတီမြစ်မှ သယံဇာတ ထုတ်ယူမှုကြောင့် ကမ်းပါးပြိုကာ ရွာခြောက်ရွာ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရ
ရန်ကုန် ၊ စက်တင်ဘာ ၂၂
ဧရာ ဝတီမြစ်အတွင်းမှ သဲ၊ ကျောက်၊ ရွှေထုတ်ယူမှုများကြောင့် ကမ်းပါးပြိုမှုများ ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ် ပေါ်လျက်ရှိသဖြင့် ကျေးရွာပေါင်း ခြောက်ရွာမှာ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ရွာလုံးကျွတ် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ သည့်တိုင် သက်ဆိုင်ရာ သို့ တိုင်ကြားခဲ့သော်လည်း အရေး ယူမှုမရှိကြောင်း သိရသည်။
''ကျွန်တော်တို့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ် သက်ပြီး နေပြည်တော်သမ္မတရုံး အထိ စာတင်ပြီးသွားပါပြီ။ တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရကိုလဲ တင်တယ်။ တိုင်းအစိုးရက ဒီကိစ္စကိုလုပ်ကိုင် ခွင့် ပိတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒိုင်တွေက လုပ်ပိုင်ခွင့်ပိတ်ထား လျက်နဲ့ အခုထိ လုပ်နေကြ တုန်းပဲ။ ကျွန်တော်တို့ သက်ဆိုင်ရာတာ ဝန်ရှိသူတွေကို ၂၀၁၁ အောက် တိုဘာကနေ ၂၀၁၃ စက်တင်ဘာ အထိ အကြိမ်ကြိမ်တင်ပြနေပေ မယ့် ထိထိရောက်ရောက် ဘာမှ လုပ်မပေးသေးပါဘူး။ ၂၀၁၁တုန်း ကတော့ သမ္ဗန် ခုနစ်စင်း ဖမ်းသွား တယ်။ နောက်တစ်နေ့ကျတော့ အဲဒီသမ္ဗန်တွေ ပြန်ရောက်လာ ပြီး ပြန်လုပ်နေကြတယ်''ဟု ယင်း က ထပ်မံပြောသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မိုးညို မြို့နယ် အင်းတ္တော်လုပ်အုပ်စု ထိန် တောအုပ်စု၊ ကြို့ပင်သာအုပ်စုနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မြန်အောင် မြို့နယ် မဲခင်းချောင်အုပ်စု၊ အင်္ဂပူ မြို့နယ် ခွေးတောက်ချောင်းအုပ် စုတို့သည် ဧရာဝတီမြစ်၏အရှေ့ ဘက်ကမ်း နှင့် အနောက်ဘက်ကမ်း တို့တွင် ဆက်စပ်တည်ရှိနေကြပြီး ယင်းကမ်းပါးအနီးတွင် သဲ၊ ကျောက်၊ ရွှေစုပ်ယူသော သမ္ဗန်များကြောင့် ကမ်းပါးပြိုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ကာ ကျေးရွာအသီးသီးရှိ စာသင် ကျောင်းခြောက်ကျောင်း၊ ဘုန်း ကြီး ကျောင်း ၁ဝကျောင်း၊ လူနေ အိမ်ခြေပေါင်း ၁၅ဝဝကျော်တို့ အကြိမ်ကြိမ် ရွှေ့ပြောင်းရခြင်း ဖြစ်ကာ လယ်ဧကများစွာလည်း ဆုံးရှုံးနေရကြောင်းသိရသည်။
သဲစုပ်သမ္ဗန်များ သည် တစ် ကြိမ်လျှင် အစင်း၁ဝဝကျော်ဖြင့် နေ့ညမပြတ်စုပ်ယူကြောင်း၊ သမ္ဗန် တစ်စင်းစုပ်ယူလျှင် ပေ၂ဝပတ် လည် ကျင်းတစ်ကျင်းဖြစ်ပေါ် ကာ ကမ်းပါးများမှာရေဦးထိုးမှု ကြောင့် ပဲ့ကျပျက်စီးခြင်းများဖြစ် ပေါ်ကြောင်း၊ လက်ရှိ တွင်လည်း ကမ်းပါးများ ပြိုကျလျက်ရှိကြောင်း၊ ဒေသခံများအနေဖြင့် ထပ်မံရွှေ့ ပြောင်းရမည်ကို မလိုလားတော့ ဘဲ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် တားဆီးပေးလိုကြောင်း အဆိုပါဒေသခံအချို့က ဆိုသည်။ ''သမ္ဗန်တွေ သဲစုပ် တဲ့ဒဏ် ကြောင့် ဘာဘူကျွန်းဆိုတဲ့လယ် ယာလုပ်တဲ့ကျွန်းက ဧက၁၀၀၀ လောက်ကနေ အခုဆိုတစ်ဝက် လောက်ပဲကျန်တော့တယ်။ ငါးလ ပိုင်းတုန်းကတော့ တိုင်တဲ့သူတွေ ကို မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကခေါ် စစ်တယ်။ ကျွန်တော် တို့ကလဲ ဒီလို လုပ်ခွင့်ပြု ထားတာကို တရားဝင် စာရှိလားဆိုတာကိုပဲ သိချင်တယ်။ နိုင်ငံတော်က တရားဝင်လုပ်ခွင့် ပြုထားတာဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် တို့တွေက အတိုက်အခံမလုပ်ပါ ဘူး။ သူတို့က မင်းတို့စုပ်နေတဲ့ သမ္ဗန်တွေတွေ့ရင် ဖမ်းလာခဲ့ လို့ ပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အာ ဏာပိုင်မှ မဟုတ်တာ။ ဖမ်းရင် လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပြဿနာတက်မှာပေါ့။ လူနည်းစု ကောင်းစားရေးအတွက် အများ ပြည်သူက ဒုက္ခရောက်နေရတယ်'' ဟု အင်းတ္တော် လုပ်ကျေး ရွာအုပ်စု မှ ဒေသခံ ဦးစံသိန်းက ပြောသည်။
ဘ၀ မမေ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင် အလှမယ်ရဲ့ သူ့ဘ၀၊ သူ့အကြောင်း ပြောသွားတာကို မစ်ဆိုလိုဂျီ က အခုလို ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်ဘာသာစကားနဲ့ မေးမြန်း ဖြေဆိုထားကြတာပါ။
ထူးထူးခြားခြားယုန်တစ်ကောင်မှ ခြင်္သေ့၊ ကျားနှင့်ကျားသစ်တို့ကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သည့် အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်မှန်
Posted by drmyochit Monday, September 23, 2013, under ထူးခြားဆန်းပြား | No comments
ငါးလသားအရွယ် ယုန်ငယ်တစ်ကောင်သည် မိမိအားစားရန်ကြံလာသော ခြင်္သေ့၊ ကျားနှင့် ကျားသစ်တို့ကို
ကြောက်ရွံ့မှုမရှိ အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ယင်းကဲ့သို့ ရဲရင့်သော ယုန်ငယ်လေးကို ယခုအခါ ကျားပေါက်ငယ်များဖြင့် ရောနှောထားရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုးဝါးဆုံးမုန်တိုင်းဘေးမှ ဟောင်ကောင်ကျွန်း လွတ်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်
ယမန်နေ့ညက တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟောင်ကောင်ကျွန်းဆီသို့ဦးတည်ရွေ့လျှားခဲ့တဲ့ တိုင်ဖွန်းUsagi ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် အနည်းဆုံးလူ(၃)ဦးသေဆုံး ခဲ့ရပြီး အနီးနားရှိ ဟောင်ကောင်ကျွန်း ကတော့ အဆိုးဝါးဆုံးမုန်တိုင်အန္တရာယ်ဘေးမှ လွတ်ကင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။ သေဆုံးသူ(၃)ဦးမှာ Guangdong ပြည်နယ်မှဖြစ်ကြပြီး၊ (၂)ဦးမှာ သစ်ပင်များလဲပြိုရာမှထိခိုက်မိပြီး သေဆုံးရခြင်းဖြစ်ကာ ကျန်(၁)ဦးမှာတော့ မှန်ကွဲများထိရှမှုကြောင့် သေဆုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာ တနင်္ဂနွေနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် (၁၉း၄၀) နာရီအချိန်မှာ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကမ်းခြေ ကို ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့် ဟောင်ကောင်ကျွန်းတွင် အပျက် အစီးများ နေရာအနှံ့ တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အချို့ဒေသများတွင်လည်းရေဖုံးလွှမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။
ဟောင်ကောင်ကျွန်းအတွက် ကံကောင်းသွားစေသောအချက်မှာ မုန်တိုင်းဟာ ကမ်းခြေကိုမဖြတ်မီ (၁)နာရီ ခန့်အလိုတွင်(ဒေသစံတော်ချိန်၁၉း၀၀ နာရီမတိုင်မီ) မှာ Super Typhoon အဆင့်မှ Typhoon အဆင့်ကို အားလျော့ သွားစေ ခဲ့တဲ့အပြင်၊ သွားရာလမ်းကြောင်းမှာလည်း ဟောင်ကောင်ကျွန်းမှ ဝေးရာဖက်ကို ပြောင်း လဲရွေ့လျှားသွားခဲ့တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
သေကြာနေ့ကလည်း ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ ကြားမှ ဖြတ်ကျော်စဉ် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း USAGIကြောင့် ဖိ လစ်ပိုင်နိုင်ငံ လူဇုံကျွန်းမှာ လူ(၂)ဦး အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။
ဂျပန်ဘာသာအအားဖြင့် ယုန် လို့အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ USAGI မုန်တိုင်းဟာ ကမ်းကို ၀င်ရောက်စဉ် လေ တိုက်နှုန်း 165 km/h (103 mph) ရှိခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ လူဦးရေထူထပ်တဲ့ Pearl မြစ်ရဲ့ မြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်ဒေ သအနီးမှ ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက် ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ကမ်းကိုဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဇာတ်လမ်းကတော့ သာဂိတိုနဲ့ လာပတ်သက်မှုရှိမရှိ ဆိုင် မဆိုင် ဆိုတာ ကိုတော့ ဆက်လက်ရှုစားကြရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Typhoon USAGI Update
Posted by drmyochit Monday, September 23, 2013, under ကျန်းမာရေးဆောင်းပါး | No comments
ဒီလို မေးရင် ဘယ်လို ဖြေကြမလဲပဲနော်။ အသက်ရှူတာပဲ မွေးကတည်းက ရှူလာတာ၊ ရှူတတ်တာပေါ့..၊ ဘာ လာကြောင် နေတာလဲ ဆိုပြီး ပြန်ပြောကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် တိတိ ကျကျ ထပ်ပြီး မေးပါဦးမယ်။
ဒီလို မေးရင်တော့ အနည်းငယ် စဉ်းစား သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးမှာ အသက်ရှူတာ နည်းစနစ်လို့သေးလို့လား။ ဒီလိုပဲ နှာခေါင်းက ရှူချင်ရှူမယ်၊ ပါးစပ်နဲ့ ရှူချင်ရှူမယ်၊ အဆန်းလုပ်ပြီး လျှောက်မေးနေတာလို့ ထင်ကြပါ လိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ အသက်အပြည့်အ၀ ရှူပြီး ကိုယ်ခန္ဓာ နွမ်းနယ်ပင်ပန်းမှုတွေကို ချက်ချင်းပြေ ပျောက်စေတဲ့ နည်းစနစ် အမှန် တကယ်ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လှုပ်ရှားမှုနည်းတဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ ဒီလို နည်းစနစ်မှန်မှန်နဲ့ အသက်ရှူ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို သိထားသင့်ပါတယ်။ Time Saving Idea စာစောင်ထဲမှာ ဖော်ပြ ထားတဲ့ အချိန်မကုန် မပင်ပန်းဘဲ ကျန်းမာရေး အတွက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နိုင်ဖို့ တင်ပြထား ချက်တွေ ကို အခြေခံပြီး ရေးသားတင်ပြပေးပါ့မယ်။
ဒီ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ခြင်းဖြင့် အဆုတ်ရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ အစာမကြေ ဖြစ်ခြင်းတွေ ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး၊ အလုပ်ခွင်မှာ ပင်ပန်းသမျှတွေကို ယူပစ်လိုက်သလို ချက်ချင်းသိသာ ပြေပျောက်စေနိုင် တယ် ဆိုတာ အသေအချာ ပြောနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ အချိန်မကုန် ငွေမကုန်တဲ့ အပြင် အင်မတန်ရိုးရှင်း လွယ်ကူတဲ့ အတွက် မည်သူမဆို ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ပြီး လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အဟာရနဲ့ အောက်စီဂျင်တို့ ပေါင်းစပ်ပြီး ဆဲလ်အသစ်တွေ မွေးဖွားရင်း၊ ဆဲလ် အဟောင်းတွေ သေဆုံးရင်းနဲ့ ဖွဲ့တည်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အစားအစာ အဟာ ရကို ဦးစားပေး စားသုံးတတ်ကြပါတယ်။ အဟာရ ဖြစ်စေမယ့် အစားအစာကို ရွေးချယ် စားသုံး ကြတာ အများစုပါ။ သို့ပေမယ့် အဟာရချည်း ပြည့်စုံနေလို့ မဖြစ်ပါ။ အောက်စီဂျင်လည်း အချိုးညီညီ ပါဝင် ဖို့ လိုပါတယ်။ သို့မှသာ အဟာရနဲ့ အောက်စီဂျင် အပြန်အလှန် အကျုိးပြု ထောက်ပံ့ပေးပြီး ညီညွတ်မျှတတဲ့ ကျန်းမာ ရွှင်လန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဖြစ်လာမှာပါ။
လူတွေဟာ သွားလာ လှုပ်ရှား လုပ်ကိုင်နေကြပေမယ့် အသက်ရှူတဲ့အခါမှာတော့ အပြည့်အ၀ မရှူကြပါဘူး။ အသက် အပြည့်အ၀ မရှူတော့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အောက်စီဂျင်လည်း အပြည့်အ၀ မရပေ ဘူးပေါ့။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိုင်လျက်သော်လည်းကောင်း၊ ရပ်လျက်သော်လည်းကောင်း အလုပ် လုပ်နေ မယ်၊ အသက်လည်း အပြည့်အ၀ မရှူနိုင် ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေ သွေးထဲ ၀င်ရောက် လာပြီး လေးလံ ထိုင်းမှိုင်းသွားစေပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အောက်စီဂျင် နည်းပါး သွား တာကြောင့် နွမ်းလျသွားတာပါ။ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ ဇက်ကြောထိုးမယ်၊ မအီမသာ ဖြစ်မယ် စသဖြင့် ခံစားလာ ရတော့ တာပဲ။ အဲဒီမှာ ဘာဖြစ်မှန်း မသိဘူး ဆရာရယ် ဆိုပြီး ဆရာဝန်ထံ သွားပြရတော့တာပဲ။ ဒီလို ဖြစ်ရတာ ဟာ အောက်စီဂျင် မပြည့်ဝလို့၊ အောက်စီဂျင် လိုအပ်လို့ပါ။ လူဟာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ အသက် ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ရှူကြပါတယ်။ နိုးထနေချိန် တွေမှ အပြည့်အ၀ အသက်ရှူတာ မရှိသလောက်ပါ။
အထူးသဖြင့် အားကစား မလုပ်ဘဲ တခြားအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်နေချိန်မှ လူ့ အဆုတ်ရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းက ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပဲ အသက်ကို ရှူသွင်း ရှူထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ အားကစား လုပ်နေသူ တွေကတော့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ကနေ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရှူထုတ် ရှူသွင်းပြုလုပ်ပါတယ်။ အိပ်နေတဲ့ အချိန်မှာတော့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း က နေ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အထိ အသက်ရှူပါတယ်။ လူသားနဲ့ သက်ရှိတွေအတွက် ကံကောင်း တာက သစ်ပင်တွေက နေ့ခင်းမှာ ကာဗွန်ကို စားသုံးပြီး ညခင်းပိုင်းမှာ အောက်စီဂျင်တွေ ပြန်လည် ထုတ်လွှတ်ပေးနေတာပါ။
အခု ဆက်ပြီး အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ အကြောင်း ဆက်လက်တင်ပြပါ့မယ်။ အဆုတ်ထဲကို လေ အပြည့် အ၀ ရောက်ရှိအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ အချိန် ၅ မိနစ်ကနေ ၁၅ မိနစ်လောက် ရရင်ပဲ အဆင်ပြေ ပါတယ်။ လမ်းသွားရင်း၊ ကားစီးရင်း၊ ကုလားထိုင်ပေါ် ထိုင်ရင်း၊ အိပ်ရာပေါ် ပက်လက် လှန်လှဲ အိပ်ရင်း ဘယ်လို အနေအထားမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်လို့ရပါတယ်။ အကောင်း ဆုံး ကတော့ လက်တင်ပါတဲ့ ကုလားထိုင် (Arm Chair) ပေါ်မှာ (သို့မဟုတ်) ပြင်ညီကြမ်းပြင် (ဆိုဖာပေါ်မှာ မဟုတ်) ပေါ်မှာ လေ့ကျင့်ခြင်းပါ။ ပထမဆုံး လက်တင်ပါတဲ့ ကုလားထိုင် ပေါ်မှာ လေ့ကျင့်ဖို့ အတွက် အရင်ပြော ပါမယ်။
လက်တင်ပါ ကုလားထိုင်ပေါ် သက်သောင့်သက် အရှိဆုံး အနေအထား အတိုင်း ထိုင်ပါ။ လက်နှစ်ဖက်ကို တန်းပေါ် တင်၊ ခြေထောက် တွေကို ရှေ့ကို ဆန့်ထား၊ ခေါင်းကို နောက်မှီ တန်းပေါ် အနည်းငယ် မော့ပြီး တင်၊ နောက်စေ့နဲ့ ချိတ်ထား၊ မျက်နှာကို ရှေ့သို့ တည့်တည့်ထား၊ မျက်လွှာကို ပိတ်၊ ခါးကို ဆန့်၊ ပုံမှန် အသက်ရှူ၊ ခေါင်းကို ဟိုဘက် နည်းနည်း ဒီဘက် နည်းနည်း လှုပ်ပေးပြီး အသက်ရှူ လေ့ကျင့်ခန်း စပါ့မယ်။ ထူးထူး ဆန်းဆန်းကြီး မဟုတ်ပါ။ လေကို နှာခေါင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည့်ချင်း ရှူသွင်းပါ။ အဆုတ်ထဲပြည့်အောင် ရှူသွင်းပါ။ အဆုတ်ထဲ နောက်ထပ် လေတစက်မှ ထပ်ရှူသွင်းလို့ မရတော့တဲ့ အထိ ရှူသွင်းပါ။ အဆုတ်ထဲမှာ လုံးဝပြည့်နေတဲ့ပြီ ဆိုရင် ချက်ချင်း ပြန်မထုတ်သေးဘဲ ခေတ္တ အောင့်ထားပါ။ အောင့်နိုင်သလောက် အောင့်ထားပါ။ လုံးဝ မအောင့်နိုင်တဲ့ အထိ အောင့်ထားပါ။ မအောင့်နိုင် တော့တဲ့ အခါကျမှ ပါးစပ်က တဖြည်းဖြည်းချင်း လေကို ပြန်ထုတ်ပါ။ အဲဒီလိုနဲ့ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းကို အချိန်ရသလောက်၊ လုပ်နိုင်သလောက် အကြိမ်ရေအထိ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သတိပြုရမှာက ရှူသွင်းတဲ့ အချိန်၊ အောင့်ထားတဲ့ အချိန်နဲ့ ရှူထုတ်တဲ့ အချိန်၊ ရှူထုတ်ပြီး အောင့်ထားတဲ့ အချိန်တွေ ညီနေရင် အကောင်းဆုံးပါ။ ဆိုပါတော့ အသက်ရှူသွင်းတဲ့ အခါမှာ စိတ်ထဲကနေ ၁.၂.၃….. စသဖြင့်ရေတွက်ကြည့်ပါ..။ ၁၅ ရတယ် ဆိုပါစို့။ အသက်ရှူပြီး အောင့်ထားတဲ့ အချိန်ဟာလည်း ၁၅ အထိရဖို့၊ အသက်ပြန်ရှူထုတ် တဲ့အခါမှာလည်း ၁၅ အထိ ရဖို့ပါ။ ရှူထုတ်ပြီး အောင့်ထားရင် လည်း ၁၅ ရဖို့ပါပဲ။ အဲဒီလိုနဲ့ ၁၅ ၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀ ဆိုပြီး အရှိန်မြှင့် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို အသက်ရှုနည်းကို လေးဘက်ညီ အသက်ရှူခြင်း အနုပညာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ရှူသွင်းခြင်းနဲ့ ရှူထုတ်ခြင်းကို သာ အများစုက သိမြင်ကြပါတယ်။ ရှူသွင်းပြီး အချိန်နဲ့ ရှူထုတ်ပြီး အချိန်ကို သတိမမူမိ၊ မသိကြပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် လိုအပ်တဲ့ အောက်စီဂျင်တွေ အဆုတ်ထဲမှာ ပြည့်ဝများပြားနေရင် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်မယ် မဟုတ်လား။ ရှူသွင်းချိန်၊ အောင့်ထားချိန်၊ ရှူထုတ်ချိန်၊ အောင့်ထားချိန် တွေ ညီနေရင် အကောင်းဆုံး အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းပါပဲ။ အဲဒီလို ရှူတော့ ဘာတွေ ရမလဲ၊ ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ ဆိုတော့ .. ပထမဆုံး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သွေးကြောတွေ အားလုံး ပွင့်သွားပြီး သွေးလှည့်ပတ် စီးဆင်းနေတာကို တဖျင်းဖျင်း ခံစားရပြီး သိနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေရင်း အလွန်ပေါ့ပါး အလွန်လန်းဆန်းသွား လိမ့်မယ်ဆိုတာ ရဲရဲကြီး အာမခံပါတယ်။ အချိန်ရရင် စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့၊ အချိန်ရရင် ရသလို လေ့ကျင့်ကြည့်ဖို့ လေးလေးနက်နက် တိုက်တွန်းပါရစေ။
အလုပ်က ပြန်လာပြီး ခန္ဓာကိုယ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ အခါမှာ ဒုတိယ ဖော်ပြမယ့် အနေအထားကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆိုဖာ သို့မဟုတ် အောက်ခင်း ထူထူမပါတဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ် ပက်လက်လှန်ပြီး အိပ်လိုက်ပါ။ ခေါင်းအုံးနဲ့ အခြား အခုအခံ ဘာမျှ မသုံးပါနဲ့။ ခန္ဓာကိုယ်ကို စန့်နိုင်ဆန့်ပါ။ ဖြောင့်နိုင်သမျှ ဖြောင့်ဖြောင့်ထားပြီး၊ အထက်က ပြောခဲ့သလို လေးဘက်ညီ အသက်ရှူခြင်း အနုပညာကို လေ့ကျင့်ပါ။ ညီညွှတ်မျှတခြင်းဟာ အနုပညာမှာ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ အသက်ပြည့်ပြည့်၀၀ ရှူပြီး အားအင်ပြည့်လျှမ်း စိတ်ရွှင်လန်းဖို့ အသက်ရှူခြင်း အနုပညာကို လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ကြည့်ပါ။ အမှန်တကယ် အကျိုးရှိမယ် ဆိုတာ အာမခံ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ အလုပ်များပြားပြီး ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်းကို အချိန်ပေးပြီး မလုပ်နိုင်တဲ့ သူတွေ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ကြည့်ဖို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိတယ် ဆိုရင်တော့ လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေပေးလိုက်ပါဦး။ ကျန်းမာခြင်းလက်ဆောင်ထက် ကောင်းတဲ့ လက်ဆောင်မွန်ဆိုတာ မရှိဘူး မဟုတ်လား။ ။
Posted by drmyochit Monday, September 23, 2013, under ရသ | No comments
အို့့့့့  မြန်မာပြည်ဖွားတိုင်းရင်းသားအပေါင်းတို့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့် သာသနာ ကို ချစ်မြတ်နိုးကြပါ။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြပါ။ အသိ/သတိရှိကြပါ။
အသားရောင်မတူ ဘာသာမတူ နှာခေါင်းချွန်ချွန် မုဆိတ်မွှေးနှင့် မြန်မာ-မွတ်စလင်ပြောရုံနှင့် နိုင်ငံတော် အရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့်ပေးတော့မှာလား ?
သူတို့က အမိမြန်မာနိုင်ငံတော် အလံကိုကော ဦးညွတ် အလေးပြုလို့လား ?
"လူအခွင့်အရေး" တစ်ခုတည်းကိုသာ လက်ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး မိမိအမျိုးသားရေးနဲ့ မိမိတို့နိုင်ငံတော်အတွက် လိုအပ်သည့် ဥပဒေတွေကို ထုတ်ပြန်ပြုပြင်ခြင်း မရှိဘဲ နေရတော့မှာလား ?
"လူအခွင့်အရေး" ခေါင်းစဉ်တပ်လို့ အိမ်ရှင်/ ဧည့်သည် ကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ကြတော့ မှာလား ?
"လူအခွင့်အရေး'ဆိုတာ လူတစ်ယောက် လူတစ်ဦးရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဥပဒေဆိုတာ သင့်၏/မသင့်၏ တားမြစ်ထားတာ။
ဒါတွေကို ကွဲပြားခြားနားကြပါရဲ့လား ?
လူတစ်ယောက်၏ အခွင့်အရေးနဲ့ တစ်မျိုးသားလုးံရဲ့ အခွင့်အရေး ဘယ်ဟာ အရေးကြီးလဲ ?
အကျွန်ုပ်တို့သည် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုးံအမ အောက်တွင် လိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကုတ် အားထုတ်နေထိုင်ကြပါမည်။
သို့သော့့့့့့့့် 
ငါတို့၏ ဘာသာ သာသနာကို ထိပါးလာလျှင်ဖြင့်
ငါတို့ ငုံ့ခံကြမည် မဟုတ် ။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ သမိုင်းဝင် Church ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းအပြင်မှာ အသေခံ ဗုံးခွဲ သမား ၂ ယောက်ရဲ့ ပြိုင်တူ ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ၇၈ ယောက်ထက်မနည်းသေ ဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ နှစ် အတော်ကြာအတွင်း ပါကစ္စတန်ရဲ့ ခရစ်ယာန် လူနည်းစုတွေကို အသေအပျောက် အများ ဆုံးဖြစ်အောင် တိုက်ခိုက် လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒဏ်ရာရသူ ၁၂၀ အနက် အတော်များများဟာ စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမှာ ရှိတယ်လို့ Peshawar မြို့ဆေးရုံ အုပ်က ပြောပါတယ်။ သေဆုံးသူတွေထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေ၊ ကလေးတွေနဲ့ Church ရဲ့ အပြင်မှာ လုံခြုံရေး တာဝန် ယူ ထားသူ မူဆလင် ရဲအရာရှိ ၂ ဦး လည်း ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီတိုက်ခိုက်မှု သူတို့ရဲ့ လက်ချက်ပါလို့ ပါကစ္စတန်-တာလီဗန်တွေက ကြေညာ ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်ရဲ့ ဝေးလံ ခေါင်သီတဲ့ တိုင်းရင်းတောင်တန်းဒေသကို အမေရိကန်က အဝေးထိန်းမောင်းသူမဲ့ ဒုံးလက်နက်တွေ နဲ့ တိုက်ခိုက်တာ မရပ်မချင်း မူဆလင်မဟုတ်သူတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ဆက်လက် တိုက်ခိုက် သွားမယ် လို့လည်း တာလီဗန် ကြုံးဝါးနေကြပါတယ်။
မောင်းသူမဲ့ အဝေးထိန်းဒုံးလက်နက်နဲ့ နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်တာဟာ တနင်္ဂနွေနေ့က ၀ါဇီရီစ တန်မြောက် ပိုင်း ရှိ အိမ်ဝင်း ၂ ခုကို ဖြစ်ပြီး စစ်သွေးကြွလို့ မသင်္ကာသူ ၆ ယောက်ကို သုတ်သင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပါကစ္စ တန် ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
လျှို့ ဝှက်ကင်မရာရန်မှကင်းဝေးရန် မည်သို့ကာကွယ်နိုင်မည်နည်း သိသင်သော အရာများ
Posted by drmyochit Monday, September 23, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တပ်ဆင်ထားမထား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ အ၀တ်အထည်စတိုးဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ ပလာဇာတွေရဲ့ အ၀တ်အစားလဲခန်း (အ၀တ်အထည်အသစ်တွေကို စမ်းသပ်ဝတ်ဆင်ကြည့်တဲ့အခန်း) တွေမှာ မသမာသူတွေက hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တွေ တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကင်မရာတွေဟာ သေးငယ်လွန်းတာကြောင့် ဘယ်နားမှာတပ်ဆင်ထားလဲဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းကတော့ မိမိမှာပါလာတဲ့ mobile phone နဲ့စမ်းသပ်တဲ့နည်းပါပဲ။
ဒီစာလေးကို သင့်ရဲ့ "သူငယ်ချင်းတွေ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမ" တွေဆီကို forward လုပ်ပေးပါ။ ဒီစာလေးကိုမျှဝေခြင်းအားဖြင့် "အမျိုးကောင်းသမီးများစွာရဲ့ အရှက်နဲ့ သိက္ခာ" ကို ကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ ပြောင်းလဲမှုက တဖက်သတ် ဆန်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုလို့ ဒေါ်စုဆို
Posted by drmyochit Monday, September 23, 2013, under မြန်မာသတင်းများ | No comments
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြောင်းကို ပြောင်းရမယ်လို့ ပြောခဲ့သလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ
ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု တွေဟာလည်း အတိုက်အခံနဲ့ အစိုးရတို့ ညှိနှိုင်း တိုင်ပင် လုပ်ဆောင်သွားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုမဟုတ်ပဲ တဖက်သတ်ဆန်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလိုက်
စင်္ကာပူ နိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာ မိ သား စု တွေ နဲ့ တွေ့ဆုံ စဉ်မှာ ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်ဂေရီ၊ ချက်နဲ့ ပို လန် နိုင် ငံ မှာ ဖြစ် ခဲ့ တဲ့ နိုင်ငံရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး တွေမှာ အတိုက် အခံဖက်နဲ့ အာဏာရှင်ဖက် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥ ပ ဒေ တွေ ရေး ဆွဲ ကြတာ ဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာ နိုင်ငံမှာတော့ အစိုးရ ဖက်ကနေ တဖက်သတ် ဆုံးဖြတ် လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိပဲ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေ ဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုသူတွေ ဝင်ရောက်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ပြောလိုက်ပါတယ်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့လည်း တဖက်သတ်အမြတ်ကိုသာ မကြည့်ပဲ တာဝန်သိတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမျိုး ဖြစ်ဖို့ လိုကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ပညာတတ်မြန်မာတွေအနေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် တစ်နည်းတစ်လမ်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကို အကူအညီပေးကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့မှာတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Lee Hsien Loong နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ရှိကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ကင်ညာရှော့ပင်း အကြမ်းဖက်မှု လူ ၆၉ သေ၊ ၁၇၀ လောက်ဒဏ်ရာရ
ရှော့ပင်းစင်တာအတွင်း ပုန်းအောင်းနေကြတဲ့ မိသားစုတစ်စု (Credit: AFP)
အရှေ့အာဖရိကရှိ ကင်ညာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော် Nairobi မြို့ ရှော့ပင်းစင်တာတစ်ခုမှာ စနေနေ့တုန်းက စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ ဝင်စီးခဲ့ရာက လူ ၆၈ ယောက်သေဆုံးပြီး ၁၇၀ လောက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
Nairobi မြို့က Westgate ရှော့ပင်းမောလ်ကို Al Shabab အစ္စလာမ်မိ စစ်သွေးကြွအဖွဲ့က ဝင်စီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဓားစာခံတချို့ကို ဖမ်းဆီးထားပြီး အဲဒီနေရာကို ဝင်စီးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်သမားတွေက ဈေးဆိုင်ထဲကို လက်ပစ်ဗုံးတွေ ပစ်ပေါက်ခဲ့သလို အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာလည်း စက်သေနတ် ၂လက်ကို ကိုင်ပြီး ပစ်ခတ်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
သေဆုံးသူ ၆၈ ယောက်ထဲမှာ ကင်ညာနိုင်ငံ သမ္မတရဲ့ တူတော်သူတစ်ဦးနဲ့ သူ့နဲ့ စေ့စပ်ထားသူ အမျိုးသမီးတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
အဲ့ဒါ့အပြင် သြစတြေးလျနဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားကို ခံယူထားသူ တစ်ဦးလည်း သေဆုံးသွားကြောင်း သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးရာ ဌာနက အတည်ပြုခဲ့ပေမယ့် သေဆုံးသူရဲ့ နာမည်ကိုပြောဖို့တော့ ငြင်းဆိုထားပါတယ်။
လူပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး အဲဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့ ကင်ညာအစိုးရတို့ကြား ပြေလည်မှုမရသေးပဲ အခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Al Shabab အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေက ကင်ညာနိုင်ငံနဲ့ ဆိုမာလီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကို ကင်ညာအစိုးရက ဖြိုခွင်းတိုက်ခိုက်နေတာကို တုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ခုလို ရှော့ပင်းစင်တာကို ဝင်စီးရတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုထားပါတယ်။